Marary i Taiwan : Hoy Ireo Mpianatra Manao Hetsi-Panoherana Mantsy Ny Minisitry Ny Fanabeazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2012 12:09 GMT
Tamin'ny volana lasa teo, ny Next Media Ltd. ao Hong Kong dia nanambàra ny fanapahan-keviny hivarotra ny trano fanaovam-printiny sy ny fahitalavitra any Taiwan amin'ny sanda HKD4.64 billion ( 598.7 tapitrisa dolara Amerikana) aminà vondron'orinasa Taiwanaise maromaro, isan'izany ny 32% amin'ny fampiasam-bolany ho an'ny Want Want China Holdings, izay heverina ho media iray goavana miteraka resabe, noho ny Filohany Tsai Eng-meng manana fifandraisana ara-barotra betsaka amin'ny Tanibe Shina sady mikolokolo fifandraisana akaiky eo amin'ny tany roa tonta amin'ny alàlan'ny TV-ny, ny gazetiny sy ny gazetiboky, arahan'ireo tatitra manasohaso an'i Shina raha resaka fampitàm-baovao.
Mijery lavitra sahady ny fiantraika ratsin’ ilay fifanarahana, ireo mpamoaka lahatsoratra sy ireo mpanao gazety avy amin'ny Taiwan Next Media Group dia nanao fihetsiketsehana ho an'ny fahaleovantenan'ny asa famoahan-dahatsoratra avy amin'ireo mpitantana ho avy, raha ireo Taiwanais mpianatra kosa nizotra tamin'ny fanentanana Tsy Fankasitrahana ny Want Want nandritra ireo tapa-bolana lasa teo, ho fampitandremana ny vahoaka manoloana ny fiantraika ratsin'ny ampihimamba atao amin'ny media.
Ireo mpanaop fihetsiketsehana, nitafa tamin'ny mpanao gazety teo ivelan'ny Executive Yuan tamin'ny 27 Novambra 2012. Sary avy amin'ny pejy Facebook : Tsy mila Want Want aho. Fampiasàna tsy itadiavam-bola.
Hatramin'ny 26 Novambra 2012, nanomboka nifamory teo ivelan'ny Executive Yuan (Mpanatanteraka), ny mpianatra nangataka [zh] ny hanaovana lalàna mandà ny ampihimamba atao amin'ny media, hitakiana ny fifanarahana hisian'ny fahaleovantenan'ny asa famoahana lahatsoratra any anatin'ireo fikambanana media samihafa sy hanoherana ny fifanarahana eo amin'ny Next Media Ltd sy ny Want Want China Times. Na teo aza ny toetrandro nangatsiaka sy nanòrana, marobe ireo mpianatra no nijanona nandritra ny alina sy ny andro nanaraka io, niaraka tamin'ireo mpampianatra ny asa fanaovana gazety sy mpiasa marobe avy amin'ny media, nanao tafa ho an'ny mpanao gazety teo amin'ny toerana nanaovana ny hetsika.
Betsaka ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ireo mpianatra satria tsy nahavita mba niseho teny an-toerana ny filohan'ny Executive Yuan no sady tsy namaly ny fangatahan-dry zareo; ireo mpianatra sady mpikatroka mafàna fo dia nanapa-kevitra avy eo fa hanao famoriam-bahoaka iray hafa ny 29 Novambra 2012 teo ivelan'ny Fair Trade Commission. Nandritra izany, ireo mpianatra Taiwanais any ampitan-dranomasina dia naneho ny fanohanan-dry zareo tamin'ny fampakàrany sary miaraka aminà teny faneva [zh] :
Fametapetahana sary fanohanana avy amin'ireo mpianatra Taiwanais any Eoropa. Sary avy amin'ny pejy Facebook : Taiwan EU Watch. Fampiasàna tsy itadiavam-bola.
Manohitra ny Ampihimamba Atao amin'ny Media
Mandà ny tàna-maloton'i Shina
Miaro Ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety
Miaro an'i Taiwan am_______
Niverina an-tany niaviana, nanao dia lavitr'ezaka nankany Taipei ireo mpianatra avy any atsinanana sy atsimon'i Taiwan mba hanatevina laharana ilay hetsi-panoherana tamin'ny 29 Novambra. Wang Weilong （黃瑋隆）dia isan'ireny mpianatra ireny ary nandrakitra lahatsary iray izy mba hiraketana ny fihetsehampony sy ny diany :
Voamarika fa maherin'ny 30 ireo anjerimanontolo [zh] nanana mpianatra nisolo tena azy tamin'ilay hetsi-panoherana ary niara-nizotra ry zareo avy ao amin'ny Executive Yuan (mpanatanteraka) ho an'ny amin'ny Legislative Yuan (mpanao lalàna) mba hanao tsindry amin'ireo solontenan-dry zareo, hiantohana ny fanaraha-maso ny lalàna mandràra ny ampihimamba atao amin'ny media.
Ho valin'ny hetsika fanoherana nataon'ireo mpianatra, dia nandefa taratasy ny filohan'ny Biraon'ny Fanabeazana ao Taiwan, tamin'ny 30 Novambra 2012 mangataka amin'ireo birao mpisahana ny mikasika ny mpianatra any amin'ireo anjerimanontolo samihafa mba hijery akaiky ny fahasalaman'ny mpianatr'izy ireo sy hanao an-tànana ny lisitr'ireo mpianatra izay nandray anjara tamin'ilay hetsi-panoherana. Nitete nivoaka tety ivelany ilay taratasy ary nahatezitra ireo mpianatra izay namoaka fanambaràna iray [zh] manameloka ny Biraon'ny Fanabeazana noho ny fihatsaram-belatsihiny amin'ny fanehoany fikarakaràna azy ireo:
Mandefa antso amin'ny governemanta izahay mba tsy hamotika ny fototry ny demaokrasia sy ny fahalalahana eto Taiwan intsony. Niatrika ireo polisy mpandrava korontana nitàna kibay sy ampinga izahay teo ivelan'ny Executive Yuan, sàkana sy fefy vy teo ivelan'ny Fair Trade Commission. Rehefa niverina tany amin'ny trano fonenan'ny mpianatra, dia tsy maintsy nokarakarain'ireo manampahefana tao an-tsekoly ny ara-pahasalamànay. Tianay ny milaza amin'ny filohan'ny Biraon'ny Fanabeazana, Chiang Wei-Ling, hoe “Sefo, manana nofinofy izahay, te-hiaro ny demaokrasia sy ny fahalalahana eto Taiwan izahay. Salama dia salama tokoa izahay, fa ny Biraon'ny Fanabeazana no marary. Andràmany poretina ny hetsiky ny mpianatra. Marary ity firenena ity, efa miha-lò ny fototry ny fahalalahany.”